Antony mahatonga ny varotra nomerika mahomby - Victor Mochere
Ny marketing dizitaly no fampiasana tsara indrindra amin'ny Internet mba hanatrarana ny mpanjifa amin'ny nomerika. Iray amin'ireo fitaovana mampientanentana indrindra azon'ny mpivarotra ampiasaina hampitomboana ny fisiany an-tserasera. Izany no ho avin'ny varotra, miala amin'ny varotra mahazatra. Fomba iray hampitomboana ny fahatsiarovan-tena sy ny fahatokisana ny marikao na ny vokatrao/serivisy amin'ny alàlan'ny haino aman-jery nomerika.
Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny orinasa lehibe avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia mampiasa vola amin'ny sehatra ara-barotra igital. Amin'izao fotoana izao, ny tsy fananana fanatrehana an-tserasera dia fifanarahana ratsy ho an'ny orinasa mitombo. Ny orinasa iray dia mety hamoy fahafahana sy hevitra lehibe maro izay tsy hita afa-tsy amin'ny tontolo an-tserasera.
Ireto ny antony lehibe mahatonga ny marketing dizitaly mahomby.
1. Ny varotra nomerika dia manome fahafahana mitovy ho an'ny orinasa tsirairay
2. Ny varotra nomerika dia manampy amin'ny famokarana fidiram-bola tsara kokoa
3. Ny varotra nomerika dia lafo kokoa noho ny varotra mahazatra
4. Ny marketing dizitaly dia manome fifandraisana amin'ny mpihaino kendrena
5. Ny marketing dizitaly dia manangana lazan'ny marika
6. Mifandray amin'ny mpanjifa finday ny marketing nomerika
7. Ny marketing nomerika dia manome fanaraha-maso
8. Manao izany ny mpifaninana aminao
Ny Marketing Digital dia mampiakatra ny kianja filalaovana amin'ny fanomezana ny orinasa madinika sy salantsalany ny fahafahana hifaninana amin'ireo orinasa lehibe ary hisarihana ny anjarany amin'ny fitomboan'ny fifamoivoizana. Miaraka amin'ny varotra nomerika, ny orinasa madinika dia manana loharanon-karena hanatanterahana ny varotra sy ny varotra ny entany sarobidy izay tsy nisy afa-tsy tamin'ny orinasa lehibe teo aloha.
Ny teknika ara-barotra nomerika mahomby dia hanome tombony be dia be ho anao sy ny orinasanao amin'ny lafiny fidiram-bola ambony sy tsara kokoa. Ny orinasa mampiasa marketing dizitaly dia miteraka orinasa 78% bebe kokoa raha oharina amin'ireo orinasa tsy mampiasa marketing nomerika. Ireo orinasa mampiasa paikady ara-barotra dizitaly dia mahita avo 2.8 heny ny fanantenan'ny fitomboan'ny fidiram-bola. Miaraka amin'ny fanantenan'ny fitomboan'ny fidiram-bola tsara kokoa, ny orinasa madinika sy salantsalany dia hanana vintana avo 3.3 heny kokoa amin'ny fanitarana ny orinasany.
Araka ny fantatsika rehetra, ny orinasa madinika dia manana loharanon-karena tena kely ary na dia ny capitalization aza. Izany no antony lehibe mahatonga ny marketing dizitaly manome azy ireo fantsona ara-barotra tsara kokoa sy lafo kokoa izay manome vokatra. Ity fomba ity dia afaka manolo ny fantsona dokam-barotra lafo vidy toy ny fahitalavitra sy radio. Ny orinasa mampiasa fomba marketing nomerika amin'ny fampiroboroboana ny vokatra dia mahita tahiry be dia be raha oharina amin'ireo mampiasa fomba nentim-paharazana.
Ny antony lehibe mahatonga ny marketing dizitaly handray ny fantsona ara-barotra nentim-paharazana dia ny fahafahan'ny fitaovana ara-barotra amin'ny Internet hifanerasera amin'ireo mpihaino kendrena. Miaraka amin'ny marketing amin'ny mailaka, ny olona iray dia afaka mikendry mivantana olona iray. Noho izany, ny marketing dizitaly dia heverina ho endrika marketing manokana indrindra. Ny fifaneraserana tanteraka sy ny fanomezana tolotra sahaza ho an'ny mpanjifanao dia afaka manome anao fahatakarana ny zavatra tadiavin'ny mpihaino anao. Manampy amin'ny fanatratrarana tanjona voafaritra mialoha izany.
Ny herin'ny marketing dizitaly dia mahasarika ny fifamoivoizana lasibatra. Ireo karazana mpihaino ireo dia ho vonona ny hahafantatra bebe kokoa momba ny marika, vokatra, na serivisy ary mety ho liana amin'ny fividianana. Ny 50%-n'ny mpanjifa dia mirona amin'ny marika iray raha toa ka miseho indroa na mihoatra noho izany ny anarana mandritra ny fikarohana. Ny fanaterana izay nampanantenainao dia hanampy amin'ny famoronana fifandraisana tsara kokoa amin'ireo mpihaino kendrenao. Hanatsara ny lazan'ny marikao izany.
Tsy isalasalana fa ny Internet finday no onjam-baovao vaovao sy fantsom-pifandraisana. Ireo fitaovana finday ireo dia lasa ampahany lehibe eran'izao tontolo izao. Ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao dia manana finday avo lenta ary azo inoana fa mampiasa io finday io ho an'ny vaovao, tambajotra sosialy, ary hetsika hafa tsy tambo isaina. Ny marketing dizitaly dia manampy anao hanatratra azy ireo ary miaraka amin'ny fanampian'ny doka remarketing, mailaka sy lahatsoratra, ary media sosialy - afaka eo anoloan'ny mpihaino anao ianao raha mampiasa fampiharana samihafa amin'ny finday.
Ankoatra ny fifandraisana amin'ny mpanjifa, ny marketing dizitaly dia manampy anao hanara-maso ny asany. Rehefa manao fanentanana dokam-barotra mahazatra ianao, dia sarotra ny mahita ny fomba hitondranao vokatra. Na dia miditra amin'ny orinasanao aza ny olona noho ny dokao amin'ny radio sy ny fahitalavitra, dia sarotra ny mandrefy ny isan'ny olona mitsidika ny orinasanao.
Saingy miaraka amin'ny fanampian'ny marketing dizitaly dia afaka manara-maso mora foana ny metrika maro ianao, toy ny tahan'ny clickthrough, ny fahatsapana, ny fomba fijery, ny fanehoan-kevitra, ary ny maro hafa azonao atao ny manara-maso hoe iza amin'ireo doka sy karazana atiny efa hitany taloha kelin'ny nanaovany fifanarahana fividianana. Izany dia manampy anao amin'ny famaritana izay fomba ara-barotra mahomby indrindra ary manatsara ny paikadinao.
Satria ny mpifaninana aminao dia efa mampiasa vola amin'ny fomba marketing amin'ny Internet samihafa ary mahazo fitarihana vaovao fa raha tsy mampiasa vola amin'ny marketing dizitaly ianao dia mihemotra. Raha mbola te hijanona hifaninana amin'ireo mpifaninana aminao ianao, dia tsy maintsy manorina fanentanana ara-barotra an-tserasera mahomby izay hanampy anao hahazo fitarihana lehibe ary hisakana anao tsy ho very azy ireo amin'ny mpifaninana aminao.
Ny maha-zava-dehibe ny varotra amin'ny Internet dia mitombo amin'ny hafainganam-pandeha avo dia avo ho an'ny orinasa sy ny orinasa. Noho izany, ny marketing dizitaly dia lasa fifantohana lehibe ho an'ny ankamaroan'ny orinasa rehefa mikasa ny hahatratra ny mpanjifa amin'ny Internet izy ireo ary hampitombo ny varotra vokatra sy ny serivisy.